रोल्स रोयसको नयाँ कार भारतमा सार्वजनिक, कति पर्ला नेपाल ल्याउँदा ? -
रोल्स रोयसको नयाँ कार भारतमा सार्वजनिक, कति पर्ला नेपाल ल्याउँदा ?
काठमाडौं। रोल्स रोयस, बेलायती प्रिमियम कार निर्माता। कारबारे जानकार जो कोही रोल्स रोयसको कार देख्नेबित्तिकै वा यसबारे आएका सामग्री भेट्दा रोकिने गरेका छन्। रोल्स रोयसको लोगोका साथै गाडीको आकर्षकताले कार प्रेमीलाई मोहित तुल्याउँछ।
हालै भारतमा रोल्स रोयसको नयाँ एसयुभी सार्वजनिक भयो। रोल्स रोयस कुलिनान ब्ल्याक ब्याज कारको मूल्य ८ करोड २० लाख भारु (१३ करोड १२ लाख रुपैयाँ) तोकिएको छ। यदि यो कार नेपाल ल्याउने हो भने सबै कर तिर्दा यसको मूल्य साढे ४२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पर्छ।
रोल्स रोयसले २०१६ मा रैथ र घोस्ट तथा ०१७ मा डाउन भारतीय बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतमा नवधनाढ्यको संख्या बढ्दै गएकाले विकासी कारको बिक्री उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। त्यसैको प्रभावस्वरुप रोल्स रोयसले नयाँ नयाँ कार सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र बनाएको छ। यसैको पछिल्लो क्रम हो कुलिनान ब्ल्याक ब्याज।
यो विलासी कारमा २२ इन्चको अलोय ह्विल छ। कार निकै आकर्षक इन्टेरियरमा उपलब्ध छ। कारको इन्टेरियरमा अपहोल्स ट्री कलर, रेयर प्यासेन्जरका लागि १२ इन्चको एचडी टचस्क्रिन अगाडिको सिट पछाडि राखिएको छ। त्यस्तै कारमा ब्लु रे प्लेयर र डिजिटल टिभीका साथ १८ स्पिकर उपलब्ध छ। यो कारमा नाइट भिजन फङसन, वाइल्ड लाइफ अलर्ट, पानारोमिक भ्यूसहितका ४ वटा क्यामेरा, एक्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, वाइफाइ हटस्पटलगायत विशेषता उपलब्ध छन्।
इन्जिन जति विलासी छ यो कार त्यति नै शक्तिशाली पनि। यसमा ६।७५ लिटरको ट्वीन टर्बोचाज्र्ड भी१२ इन्जिन लगाइएको छ। यो इन्जिनले ५ सय ९२ बिएचपी पावर र ९ सय एनएम टर्क उत्पादन गर्न सक्छ। कारमा ८ स्पिड ट्रान्समिसन छ। कारको मूल्य न्युनतम ८ करोड २० लाख भारु तोकिएको भए पनि यसको कस्टमाइजेसन र पर्सनलाइजेसनका आधारमा मूल्य बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ।
रोल्स रोयसबारे बेलायतको विलासी कार निर्माता कम्पनी हो रोल्स रोयस मोटर कार्स लिमिटेड। हाल सो कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व जर्मन कार निर्माता समूह ‘बिएमडब्लू समूह’सँग छ। रोल्स रोयसको पहिलो प्लान्ट २००३ मा बेलायतमा खुलेको थियो। रोल्स रोयस इन्जिन निर्माता कम्पनीका रुपमा विश्वभर चर्चित छ।